अटो र मोटरसाइकल | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: स्वतः र मोटो
हुंडई H1 ग्रान्ड Starex: विवरण, फोटो
हुंडई एच १ ग्रान्ड स्टारेक्स एक मिनी बस हो जुन पारिवारिक कार खण्डसँग सम्बन्धित छ। गुणस्तर र प्राविधिक विशेषताहरूको सर्तमा, यसले विश्वव्यापी ब्रान्डहरू जस्तै मर्सिडीज, फोक्सवैगन, इत्यादिसँग प्रतिस्पर्धा गर्दछ।
ZAZ Vida (ZAZ VIDA): प्राविधिक सुविधाहरू। मालिक समीक्षा
अटो ZAZ "Vida" हल्का व्यक्तिगत यातायातको मोडेल हो, जुन दुबै ह्याचब्याक र सेडानको रूपमा उत्पादित छ। २०१२ मा ठूलो पैमानेमा उत्पादन शुरू गरिएको थियो। युक्रेनमा बिक्रीको लागि एक कार ...
ZIS-110। सोभियत कार्यकारी कार
प्रकाशित 15.09.2019 13.11.2019
उच्च श्रेणी ZIS-110 को लक्जरी कार १ 1945 .XNUMX मा सिर्जना गरिएको थियो। कार क्रेमलिन नामलेक्लाटुरा, सरकार र मन्त्रीहरूको सेवा गर्ने उद्देश्यले थियो। मोडेल बढेको शक्तिको एक लोड-असर गर्ने फ्रेम संरचना थियो, सामना गर्न सक्षम ...
कायो 140: समीक्षा, विशिष्टता, फोटो, मर्मत
पिट बाइक युरोपियन देशहरूमा एकदम लोकप्रिय प्रविधि हो, तर रसियाको इलाकामा उनीहरूलाई केही आश्चर्यका साथ व्यवहार गरिन्छ। यस कोटीको प्रविधिको एक प्रकारको मोटोक्रस मोटरसाइकलको प्रतिलिपि हो। पिट बाइक ...
ट्र्याक्टर MTZ 1523: विशिष्टता र मालिक समीक्षा
प्रकाशित 15.09.2019 30.11.2019
MTZ १1523२XNUMX एक बहुमुखी पाe्ग्रा कृषि ट्र्याक्टर हो जुन कार्यको विस्तृत विस्तृत श्रृंखलामा प्रदर्शन गर्न डिजाइन गरिएको हो। मोडल रोप्ने, रोप्ने, बिरुवा उपचारको लागि माटो तयार गर्न प्रयोग गरिन्छ, फसल काट्नमा मद्दत गर्दछ र ...
T-4A ट्रयाक्टर: प्राविधिक विशिष्टता, फोटो, मर्मत
ट्रयाक्टर कृषि र औद्योगिक काममा व्यापक रूपमा प्रयोग भएको थियो, तिनीहरू सोवियत संघका धेरै उद्यमहरू द्वारा उत्पादन गरिएको थियो। काजाकिस्तान र टाढा टाढा साइबेरियामा अल्ताई प्लान्टका उपकरणहरू कामका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। यी T-4 गाडीहरू थिए, ...
टोयोटा आत्म-परीक्षण कसरी सुरू हुन्छ: चरण-देखि-चरण निर्देशनहरू। स्वचालित प्रसारण "टोयोटा" को आत्म-निदान
कार, ​​तपाइँलाई थाहा छ, यातायात को माध्यम बाट सम्बन्धित छ, तर लक्जरी सामानको होईन। यहाँ केहि निदान र मर्मत संचालन को लागत को बारे मा शंका छ। धेरै हिसाबले यो पनि लागू हुन्छ ...
"मर्सिडीज W204": वर्णन, विशिष्टता, समीक्षा
मर्सिडीज W204 सी-वर्ग मा प्रतिष्ठित मध्य आकार कार को तेस्रो पीढी हो। यसको पूर्ववर्ती W203 थियो। यो कार २०० 2007 मा, जनवरीमा र मार्चमा नै मीडियामा प्रस्तुत गरिएको थियो ...
स्कोडा ब्याजको अर्थ के हो? लोगोको ईतिहास
स्कोडा ब्याजको अर्थ के हो? प्रश्नले धेरैलाई चासो दिन्छ। यात्री कारहरूको उत्पादन गर्ने प्रख्यात चेक कम्पनीको लोगोले विभिन्न संगठनहरूलाई उत्साहित गर्दछ। केहि चराले पृथ्वीको पृष्ठभूमिमा आफ्नो पखेटा फैलिरहेका देख्दछन्, अरूहरू एक उडान वाण, अरूलाई ...
रसिया र विश्वको सैन्य गाडी। रसियन सैन्य उपकरण
राज्यहरुमा सेनाहरु बिभिन्न आक्रमणहरु बाट रक्षा गर्न र सीमा रक्षा गर्न को लागी बनाईएको छ, र सैन्य मेशिनहरु लाई उनीहरुलाई मद्दत गर्न आग्रह गरियो। एकै साथ दुबै व्यक्ति र प्रविधि धेरै नजिकबाट सम्बन्धित छन् ...
AvtoVAZ को इतिहास। चाखलाग्दो तथ्य र फोटोहरू
पछिल्लो शताब्दीको s० को दशकमा, युएसएसआरमा थुप्रै ब्रान्डको कारहरू उत्पादन गरियो। "Cossacks", "Volga" र "Muscovites" सँधै हाम्रो देशका नागरिकहरूलाई ती टाढाका समयमा याद दिलाउने स्मृतिमा रहनेछ। तर भित्र ...
मेकानिकल एन्टी-चोरी प्रणालीहरूको स्थापना। सर्वश्रेष्ठ मोडेलहरूको समीक्षा
मेकानिकल एन्टी-चोरी प्रणाली धेरै समय देखि मोटर चालकहरु बीच ठूलो मांग भएको छ। रसियन बजारले आज विभिन्न निर्माताहरूबाट मेकानिकल एन्टी-चोरी उपकरणहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। जहाँसम्म, सबै उत्पादनहरू ...
जीप "रुबिकान-रैंगलर": फोटोहरू, मालिकहरूको समीक्षा, विशिष्टताहरू
दोस्रो विश्वयुद्धको बेला, अमेरिकी कम्पनी विलिस मोटर्सले सीजे एसयूवी बनाईयो। गाडी अगाडि र पछाडि दुबै प्रयोग गरिएको थियो। उच्च क्रस-देश क्षमताले गाह्रो सडक अवस्थाहरूमा कारलाई अपरिहार्य बनायो।
विकल्पहरू र कार शेभरोलेट क्रुज ह्याचब्याकको विशेषताहरू
शेभरोलेट क्रुज २०० company देखि अमेरिकी कम्पनी जनरल मोटर्स द्वारा उत्पादित कार हो। यो कारले दुई कारहरू विस्थापित गर्यो: शेभरोलेट कोबाल्ट र शेभरोलेट ल्यासेटि। रूसमा, तिनीहरूले यसलाई कारखानामा भेला गर्न थाले ...
शक अवशोषकहरू SS20। VAZ सदमे अवशोषक
प्रश्नमा: "के कार लक्जरी हो वा यातायातको साधन हो?" - त्यहाँ कम्तिमा तीन उत्तर छन्। कसैले पहिलो विकल्प छनौट गर्नेछ, कसैले दोस्रो, र कोही - दुबै एकैचोटि। र सत्य, सामान्य रूपमा, ...
किन डिजल ईन्जिन भागे: कारण, परिणामहरू। डिजल ईन्जिनहरूको निदान
यस समयमा सब भन्दा सामान्य इञ्जिनहरू डिजल र पेट्रोल हुन्। उत्तरार्द्ध धेरै पहिले जन्मेको थियो, तर अब यसको लोकप्रियता घट्दैछ। डीजल इञ्जिनहरू अधिक कुशल र किफायती छन्। जे होस्, यति मोटर ...
घरमा मोटरसाइकल चित्रकारी
कुनै पनि डिजाइन आविष्कारले पुरानो मोटरसाइकलको लुक अद्यावधिक गर्न सक्षम गर्दछ यसरी, यदि तपाईं ध्यान दिएन भने, तपाईं यसलाई चिन्नुहुन्न। देखावटीमा यी नाटकीय परिवर्तनहरूमा चित्रकला समावेश छ। हो, नयाँ रंग, वार्निश, ...
स्कोडा यती कार: जमीन खाली गर्न, विनिर्देशहरू र समीक्षा
पहिले, स्कोडा चिन्ताले केवल सेडानहरू र स्टेशन वैगनहरू उत्पादन गर्‍यो, तर २०० in मा यती सबकम्प्याक्ट क्रसओभर बजारमा प्रवेश गर्‍यो। व्यावहारिकता, उच्च उपलब्धता र अन्य सुविधाहरूले यस कारलाई बनायो ...
तिनीहरूलाई लगाउनुहोस्। भि। Degtyareva, ZiD को रूप मा हामीलाई राम्ररी परिचित, पहिलो विश्व युद्धको समयमा स्थापित भएको थियो। त्यसबेला कोभ्रोभमा मेशिन-गन प्लान्टको पहिलो भवनहरू निर्माण गर्न थाले। धेरै वर्ष पछि, ...
63 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 2,390 प्रश्नहरू।